सात महिनामा व्यापारघाटा ८ खर्बको नजिक,व्यापार संतुलन बिग्रदै - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:५०
काठमाडौं । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आ.व. २०७५/७६ को प्रथम सात महिनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८ खर्ब ८६ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ६.० प्रतिशत र ९४.० प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५३.०८ अर्ब तथा कुल पैठारीमा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८३३.२७ अर्ब पुगेको छ । आ.व. २०७४/७५ को प्रथम सात महिनाको अवधिमा निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१४.३ रहेकोमा आ.व. २०७५/७६ को सोही अवधिमा निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१५.७ रहन आएको छ ।
यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जामा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५६.९८ अर्ब, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा ३३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३४.२७ अर्ब, अन्नको आयातमा २०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२.५२ अर्ब, हवाईजहाज तथा हवाईजहाजका पार्ट्सको आयातमा २२७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १८.९८ अर्ब, तयारी पोशाकको आयातमा १६८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २१.२९ पुगेको छ । सुनको आयामा १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०.५५ अर्ब पुगेको छ । यसै गरी औषधीको आयातमा १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १८.९५ अर्ब पुगेको छ । पोलिथिन ग्रेन्युल्सको आयातमा १८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १३.६७ अर्ब पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा रु. १०.६४ अर्ब बराबरको रासायनिक मल र रु. ९.७१ अर्ब बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर पनि आयात भएको देखिन्छ ।
उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरुमा पोलिष्टर तथा अन्य धागो, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरु, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, जुट तथा जुटका सामानहरु, जुस, चिया, कपडा, अलैंची, पश्मिना सल प्रमुख रुपमा रहेका छन् । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पोलिष्टर तथा अन्य धागोमा २१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५.५१ अर्ब, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको निर्यातमा ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि भर्ई रु. ४.३५ अर्ब, ऊनी गलैंचाको निर्यातमा १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४.२१ अर्ब, तयारी पोशाकको निर्यातमा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३.७४ अर्ब पुगेको छ । जुट तथा जुटका उत्पादनको निर्यातमा १.१ प्रतिशतले ह्रास आई रु ३.१४ अर्ब पुगेको छ । यसै गरी समीक्षा अवधिमा २.३५ अर्बको जुस, रु. २.३१ अर्वको चिया, रु. २.०० अर्बको टेक्सटाइल, रु १.८६ अर्बको अलैंची, रु. १.४६ अर्बको पश्मिना सल, रु. १.१३ अर्बको फेल्ट, रु. ९७.५ करोड जडिवुटी, रु. ८५.६ करोडको मुसुरोको दाल, रु.७४ करोडको जुत्ता निकासी भएको देखिन्छ ।
नेपालको निकासी व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, टर्की, युके, चीन, बंगलादेश, फ्रान्स, जापान, इटाली, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क आदि प्रमुुख रुपमा रहेका छन् ।
पैठारीतर्फ समग्रमा आ.व. २०७५/७६ को प्रथम सात महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा ३७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १२०.०७ अर्ब पुगेको छ । यसै गरी समीक्षा अवधिमा फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा ४१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १००.९० अर्ब, मेशिनरी तथा पार्ट्समा ४.० प्रतिशतले ह्रास आई रु. ६८.७४ अर्ब, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जामा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५६.९८ अर्ब, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा ३३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३४.२७ अर्ब, अन्नको आयातमा २०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२.५२ अर्ब, हवाईजहाज तथा हवाईजहाजका पार्ट्सको आयातमा २२७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १८.९८ अर्ब, तयारी पोशाकको आयातमा १६८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २१.२९ पुगेको छ । सुनको आयातमा १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०.५५ अर्ब पुगेको छ । यसै गरी औषधीको आयातमा १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १८.९५ अर्ब पुगेको छ । पोलिथिन ग्रेन्युल्सको आयातमा १८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १३.६७ अर्ब पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा रु. १०.६४ अर्ब बराबरको रासायनिक मल र रु. ९.७१ अर्ब बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर पनि आयात भएको देखिन्छ ।
यसैगरि दुरसञ्चारका सामाग्रीहरुको आयातमा २४.९ प्रतिशतले ह्रास आई रु. १५.४८ अर्ब पुगेको छ ।
नेपालको पैठारी व्यापारमा भारत, चीन, युएई, फ्रान्स, इण्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, क्यानाडा, स्वीट्जरलेण्ड, मलेशिया, अर्जेन्टिना, संयुक्त राज्य अमेरिका, युक्रेन, भियतनाम, दक्षिण कोरिया प्रमुुख रुपमा रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को समीक्षा अवधिमा समग्र निकासीमा उल्लेख्य रुपमा सुधार भए तापनि पैठारीमा देखिएको अत्यधिक वृद्धिका कारण व्यापारघाटामा २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल व्यापारघाटा रु. ७ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।
##import-export in nepal
#व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र